रामाेसले किन अस्वीकार गरे क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण? रोनाल्डोसँग होला त पुनर्मिलन?
नेपाली पब्लिक आइतबार, माघ १८, २०७७
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडका कप्तान सर्जियो रामोसले क्लबकोसँगको सम्झौता नवीकरण गर्न हाललाई अस्वीकार गरेका छन्। यससँगै उनको भविष्यबारे अन्यौलता बढेको छ। मड्रिडका फ्यानहरु उनले क्लबसँग सम्झौता नवीकरण गरुन् भन्ने चाहान्छन्।
तर, रामोसले सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुले उनी इटालियन क्लब युभेन्टस जाने संकेत गरेको बताइएको छ। यदि युभेन्टससँगको वार्तापछि उनले रियलसँगको नयाँ सम्झौताबारे सोच्ने समाचार एजेन्सीहरुले दाबी गरेका छन्।
रामोस र रियलबीच विगतका वर्षहरुमा पनि सम्झौता त्यति सहजरुपमा भएको थिएन। क्लब र रामोसबीचको दुरी हाललाई मेटाउन मुश्किल हुने भएकाले पनि उनी क्लब छोड्ने मनस्थितिमा पुग्न सक्छन्।
यस्तोमा उनी आफ्ना पूर्व सहकर्मी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग फुटबल खेल्न तयार हुनेछन्। युभेन्टसमा रामोस भित्र्याउन रोनाल्डोले पनि दबाब दिन सक्ने बुझिएको छ। स्पेनिस डिफेन्डर भित्र्याउन युभेन्टसबाहेक पेरिस सेन्ट जर्मन पनि इच्छुक रहेको छ।
#युभेन्टस #फुटबल #क्रिस्टियानाे_राेनाल्डाे #रियल_मड्रिड #सर्जियो_रामोस
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ १२:३६